Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 2021 Magaalooyinka Mareykanka Ugu Fiican ee Loo Dabaaldego Afarta Luulyo
Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dadku waxay u badan tahay inay isu soo ururaan ciida sanadkaan, halka kala fogaanshaha bulshada ay ahayd wax caadi ah sanadkii hore.
48 milyan oo Mareykan ah ayaa ka safri doona 50 + mayl guryahooda 4-ta qofth ee bisha Luulyo.
Mareykanku wuxuu qorsheynayaa inuu 7.5 bilyan ku bixiyo 4th ee cuntada bisha Luulyo.
64% dadka Mareykanku waxay dareemayaan madax-bannaanida dhaqaale markay tahay 4-ta Luulyo.
Iyadoo Mareykanku qorsheynayo inay si wadajir ah ugu qarash gareeyaan $ 7.5 bilyan 4th ee dabaaldegyada bisha Luulyo ee sannadkan, khubarada socdaalka ayaa maanta soo saaray warbixin ku saabsan 2021 meelaha ugu wanaagsan & kuwa ugu xun ee loogu dabaaldegayo 4ta Luulyo, iyo sidoo kale tirooyin xiiso leh oo ku saabsan ciidda Coronavirus iyo 4th ee Sahan July.
Si loo go'aamiyo meelaha ugu wanaagsan ee loogu dabaaldego munaasabadda xiddigaha ugu badan, khubaradu waxay isbarbar dhigeen 100-ka magaalo ee ugu waaweyn Mareykanka iyagoo ku saleynaya sida ay isugu dheellitiran yihiin kharashka fasaxa iyo baashaalka. Xogta la dejiyay ee 23 mitirrada muhiimka ahi waxay u dhexeeyaan celceliska qiimaha biirka iyo khamriga illaa muddada rashka la muujinayo ilaa iyo saadaasha hawada ee Afraad ee Julaay.
Magaalooyinka Ugu Fiican Ee Loo Dabaaldego Afarta Luulyo
1. New York, NY 11. New Orleans, LA
2. San Francisco, CA 12. Las Vegas, NV
3. Chicago, IL 13. Buffalo, NY
4. Minneapolis, MN 14. Orlando, FL
5. Atlanta, GA 15. Omaha, NE
6. Los Angeles, CA 16. St. Louis, MO
7. Seattle, WA 17. Honolulu, HI
8. Washington, DC 18. Milwaukee, WI
9. San Diego, CA 19. Dallas, TX
10. St. Paul, MN 20. Philadelphia, PA
4-ta Luulyo Xaqiiqda & Sawirada
$ 7.5 Bilyan: Tirada dadka Mareykanka ah waxay qorsheynayaan inay ku qarash gareeyaan 4th ee cuntada bisha Luulyo.
150 Milyan: Tirada eeyaha kulul ee la cunay midkiiba 4th of July.
$ 1.4 + Bilyan: Tirada dadka Mareykanka ah waxay qorsheynayaan inay ku qarash gareeyaan 4th ee biirka July iyo khamriga.
80%: Share of show rashka bulshada oo la joojiyay sanadii 2020 sababo la xiriira faafida.
$ 1.5 + Bilyan: Qiyaasta lacagta ku baxday rashka sanadka 2020 (73% dhaawacyada rashku waxay dhacaan bil gudaheed bisha Luulyo 4).
$ 6.7 Milyan: Qiimaha calamada Mareykanka ee la soo dhoofiyo sanadkiiba.
48 Milyan: Tirada dadka u socdaalaya 50+ mayl guryahooda 4-tath ee bisha Luulyo.
Sahaminta Natiijooyinka Muhiimka ah
Safarku wuu sii kordhayaa. 37% dad badan oo Mareykan ah ayaa safri doona 4-ta July marka loo eego sanadkii hore.
Rashka muhiim ma aha. 62% dadka Mareykanku uma maleynayaan in dowladaha hoose ay u isticmaalaan doolar canshuur bixiyaha bandhigyada rashka sanadkaan.
Ku dhawaaqida madax-bannaanida dhaqaale. 64% dadka Mareykanku waxay dareemayaan madax-bannaanida dhaqaale markay tahay 4-ta Luulyo.
Kaydinta iyo kharash garaynta. 62% dadka Mareykanku waxay aaminsanyihiin in lacagta la keydsado ay ka wadaniyad badan tahay qarash gareynta.
Kharashaad badan Maalinta Xorriyadda. 36% dadka Mareykanka ah waxay qarash badan ku bixinayaan 4-ta July marka loo eego sanadkii hore.
Qiyaastii 36% dadka Mareykanka ah ayaa qorsheynaya inay lacag badan ku qarash gareeyaan 4-tath ee bisha Luulyo ee sannadkan marka loo eego sanadkii hore. Taasi waxay muujineysaa in dadku ay u badan tahay inay isu soo baxaan ciidda sannadkan, halka kala fogaanshaha bulshada ay ahayd wax caadi ah sanadkii hore. Halka dadku ka niyad jabeen safarkii sanadkii hore ee 4-tath ee bisha Luulyo, 37% dad badan oo Mareykan ah ayaa safri doona sanadkan.
Warka dhiiri gelinta leh ayaa ah in 64% dadka Mareykanku ay dareemayaan madaxbanaani xagga dhaqaalaha ah 4taanth ee bisha Luulyo, taas oo muujineysa inaan ka soo kabsaneyno dhibaatadii uu u geystay cudurka faafa ee COVID-19. Haddii aan la helin dhammaan tallaabooyinka dhiirrigelinta ee ay dowladdu ku taageerto dadka iyo ganacsiyada yaryar, tirada dadka dareemaya madaxbannaanida dhaqaale waxay u badan tahay inay aad uga hooseyso.
Qiyaastii 62% dadka Mareykanka ah ayaa rumeysan in keydinta lacagtu ay ka waddanisan tahay qarash bixinta hadda, taas oo macno samaynaysa maxaa yeelay dad badan ayaa keydkoodii baabi'iyey aafadii. Dadka dib u dhiska keydkooda waxay yareyn karaan ku tiirsanaanta taageerada dowladda, taas oo sii deyneysa ilo badan oo dalka ah si loogu isticmaalo waxyaabo kale oo muhiim ah, sida caafimaadka bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Lacag bixinta waxay sidoo kale noqon kartaa wadaniyad, in kastoo, maxaa yeelay waxay kobcisaa dhaqaalaha waxayna ka caawisaa dalka inuu koro.
Qiyaastii 62% dadka Mareykanku uma maleynayaan in dowladaha hoose ay isticmaalaan doolar canshuur bixiye si ay ugu maalgeliyaan rashka soo bandhiga qaabkan 4th ee bisha Luulyo. Halka loo arko inay yihiin 4th dabaaldegyada bisha Luulyo, rashka waa raaxo, dadkuna waxay doorbidi lahaayeen inay arkaan doolarkooda canshuurta oo aadaya waxyaabo badan oo muhiim ah maaddaama waddanku ka soo kabanayo faafidii COVID-19.
Xiddigga Dalxiiska ee Hal -abuurka leh Tollman ayaa Lumiyay Dagaalkii ...
Kooxda Lufthansa waxay ku dhawaaqday Sarkaalka Sare ee Istaraatijiyadda
Waa maxay sababta Spain ay u joojineyso Fursad Weyn Adduunka ...
Scotland ayaa qaban doonta afti labaad oo ku aadan madaxbanaanida ...
Taliban oo si buuxda ula wareegtay Xamiidkii Kabul ...
Jeegag cusub oo adag oo loogu talagalay Madaarka Caalamiga ah ee Prague ...
(UPDATE) CDC waxay soo saartay farriin deg deg ah qof kasta oo Mareykan ah ...
Koox -kooxeedku waxay ammaaneen Wax -qabadka Koongareeska ee Bandhigga Wanaagsan ...
Biyo -xireenka Hydro Uganda: Dalxiis Cusub oo Cusub
Dalxiiska Jamaica wuxuu Tacsi u dirayaa Qoyska Sue ...
Isbitaalka Thailand wuxuu daahfuraa noocyo badan oo cusub oo Delta ah
Diyaaradda Rakaabka ee Airbus oo loo beddelay Gaadiidka Xamuulka ...
Waxaa la bilaabay dalxiiskii gobalada bariga Afrika
Jamaica "Waxay ka dhigeysaa inay dhaqaaqdo" oo leh ...
Poland waxay isu diyaarineysaa inay ku soo booddo waaxda dalxiiska
Hyatt waxay kor u qaadeysaa faylalka tacliimeed ee firaaqada iyadoo la iibsanayo ...
Liiska Buugaagta Dhiirrigelinta Sare si ay kaaga caawiyaan Kobcinta
Toddoba qof ayaa ku dhimatay fowdo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Kabul iyadoo dhammaan ganacsiga ...
Goobaha Sandal -ka oo horseed u ah Safarka leh Hubinta Fasaxa
Dib -u -furid buuxda ee xuduudaha Mareykanka si si buuxda loo tallaalo ...
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa u sheegay Air France, waan ku jecelnahay!
Hindise Sharciyeedka Dalxiiska Qaranka Cusub ee Hindiya
Mauritius ayaa soo afjartay karantiilkii dalxiisayaashii lagu garaacay ...
Rakaabkii Saarnaa Markabkii Kariibiyaanka ee Buuxa ee Tallaalka ...
Venice, California oo dhan waxay u soo baxday Armani Style Beauty